Politics Archives - News20 Media
Nov122021 by N20No Comments
नेपालमा तत्काल सैनिक शासन लागू हुनसक्ने , यस्तो छ प्रधानसेनापतिको तयारी !
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा ज्यु, सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा, भद्रकाली (काठमाडौं) विषयः मुलुकमा सैनिक शासन चाहिएको छ । हाम्रो देश डुब्न लाग्यो सेनाहरु लौ न बचाई देउ । हाम्रो देश रोइरहेको छ सेनाहरु लौ न बचाई देउ । प्रधानसेनापति ज्यु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओली, पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील प्रसाद कोइराला, मन्त्रीहरु, सभामुखहरु, उपसभामुखहरु, ६०१ सभासदहरु, ८८४ सांसदहरू र नेताहरूको कारण हाम्रो मुलुक डुब्न लागि रहेको छ । हाम्रो मुलुक रोइरहेको छ । मुलुकमा सैनिक शासन चाहिएको छ । हाम्रो देश डुब्न लाग्यो सेनाहरु लौ न बचाई देउ । हाम्रो देश रोइरहेको छ सेनाहरु लौ न बचाई देउ । प्रधानसेनापति ज्यु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओल...
Nov112021 by N20No Comments
देउवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई शासन गर्ने भए चुनाव लडेर आउनुस् भनेपछि रन्किए कमल थापा
प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शासन गर्ने मन भए चुनाव लडेर आउन चुनौती दिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । थापाले अब राजालाई गाली गरेर शासन गर्ने समय नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई शासन गर्ने मन भए चुनाव लडेर आउन चुनौती दिएपछि थापाले यसो भनेका हुन्। देउवाले अहिलेको शासन व्यवस्थाविरुद्ध पूर्व राजा लागेको आरोप लगाउँदै यस्ता गतिविधि बन्द गर्न चेतावनी दिएका थिए। तर अध्यक्ष थापाले राजाविरुद्ध आक्रोश देखाएर अहिलेको व्यवस्था नटिक्ने उल्लेख गरेका छन्। ‘राजाविरुद्ध आक्रोश होइन, सुशासन दिनुस्। न्यायालय हड्तालमा छ, संसद अवरुद्ध छ, सरकार भ्रष्टाचार र सर्वसत्तावादमा लिप्त छ। धर्म परिवर्तन व्यापक भएको छ’, थाप...
Nov32021 by N20No Comments
प्रधानसेनापतिले गरे ठूलो घोषणा, नेपालविरुद्ध काम गर्नेहरुको गयो सातो !
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले मुलुकको अस्मितामा कसैले धावा बोले सेना चुप लागेर नबस्‍ने बताएका छन् । मकवानपुरमा रहेको जस्तो गढी त्यस्तो धावा बोल्नेहरूलाई तह लगाउन उपयोगमा आउने पनि उनले बताए । मकवानपुर एउटा सामारिक स्थान भएकाले यसको महत्व सुरक्षाको दृष्टिकोणमा सधै उपयोगि रहने छ । बुधबार मकवानपुरको ऐतिहासिक चिसापानी गढीको संरक्षण पूर्वाधार निर्माणकार्यको शिलान्यास गर्दै शर्माले चिसापानी गढी पहिले पनि सामरिक ९युद्धको० रुपमा महत्वपूर्ण रहेको र अहिले पनि महत्वपूर्ण भएको बताए । आवश्यक भएको समयमा सुरक्षा फौजको अंगहरु चिसापानी गढीमा आएर बस्न सक्ने भन्दै स्थानीयको भूमिका र सहयोगको अपेक्षा समेत शर्माले गरे । महत्वपूर्ण गढीहरुको संरक्षण नगरे इतिहासको धरोहरहरु लोप हुदै जाने उनको भनाई थियो । नेपाली सेनाले मकवानपुरको चिसापानी गढीको संरक्षणको लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रधानसेनापति शर्माले प्रतिबद...
Nov12021 by N20No Comments
राजा फर्काउन केपी शर्माको चलखेल, गोप्य भेट भएको खुलाशा
काठमाडौं। प्रदेश १ को एकमात्र पाँचतारे होटल मेची क्राउनले पर्यटकीय र आन्तरिक आतिथ्यमा गति लिएको छ । मुख्यगरी भारत र नेपालको पनि आन्तरिक पर्यटनलाई लक्षित गरी गत बर्षबाट सञ्चालनमा आएको मेची क्राउनमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म पुगिसकेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दम्पत्तीसहित परिवारका सदस्यले गत बर्ष पूर्वरानी कोमल शाहको जन्म दिन सोही होटलमा मनाएका थिए। हरेक बर्षको हिउँदमा झापामा समय बिताउन पुगेका बेला पूर्वराजपरिवार होटल मेची क्राउनमा पुगेका थिए। यसैगरी गृहजिल्ला झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओली पनि सोमबार उक्त होटलमा पुगेका थिए। ओलीसँगै एमालेका स्थानीय नेतालगायत केन्द्रीय नेताले होटलको भ्रमण गरेका थिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जुन कुर्सीमा बसेका थिए सोही कुर्सीमा बसेर ओलीले होटल व्यवस्थापनको तारिफ गरेका छन्। उनले झापा जिल्लामा...
नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालबीचको चुनावी तालमेल राजनीतिक सिद्धान्त र विचारको लागि भन्दा पनि ‘करेन्ट राजनीतिक प्रोजेक्ट’को लागि हो । गणतन्त्र एमालेको एजेण्डा थिएन र अध्यक्ष ओलीकै भाषामा भन्दा ‘एमालेको एजेन्डा होइन’ । त्यस्तै राप्रपा नेपालको विधानमा गणतन्त्र होइन राजा सहितको हिन्दुराष्ट्रको परिकल्पना गरिएको छ । राप्रापा नेपाल र नेकपा एमालेबीच राजधानीका केही क्षेत्रमा मात्रै होइन देशभर भइरहेको चुनावी तालमेललाई विश्लेषकहरुले ‘अपवित्र’ गठबन्धन भनिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ‘राष्ट्रवाद’बाट शुरु भएको एमाले राप्रपा गठबन्धन राजा ल्याउन समेत एकमत देखिने केही विद्वानहरुको तर्क छ । केपी ओलीको लागि गणतन्त्र : ‘घाँटीमा अड्कीएको मासु’ राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्,‘नेपालमा गणतन्त्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको योजना थिएन र होइन । त्यसैले उनलाई गणतन्त्रको माया छैन ।’ विश्लेषकहरुको यो तर्क भित्रका रह...
राजा फर्काउन विद्या भण्डारीको चलखेल, गोप्य भेट भएको खुलाशा
राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विद्या भण्डारीको भूमिका कुनै राजामहाराजाको भन्दा भिन्न छैन । ‘हिन्दु राजाले जस्तो धार्मिक भ्रमणहरु गर्नु, पशुपतिमा पहिलो तलब दान गर्नु, विनोद चौधरीले निर्माण गरेको ‘हिन्दु धार्मिक धाममा ज्ञानेन्द्र र राष्ट्रपतिसँगै देखिनु, गणतान्त्रिक राष्ट्रपतिको छोरीको विवाहमा पूर्व राजा सहभागी हुनु, ज्ञानेन्द्रका नाती हृदयन्द्रको ब्रतबन्धमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सहभागी हुनु’ जस्ता घटनाक्रमहरुले अनिष्ठको संकेत भने अवश्य गरिरहेको छ । त्यसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न समेत राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता बढिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै उपप्रधान तथा स्थानिय विकास मन्त्री कमल थापालाई भेट्न उनले शितल निवास बोलाएकी थि...
केपी ओली राजतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्र मास्न ज्ञानेन्द्रसँग यस्तो साठँगाठँ !
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गणतन्त्र मास्न लागि परेको दाबी गरेका छन् । उनीे गणतन्त्र उल्ट्याउन लागि परेको आरोप प्रचण्डले लगाएका हुन्। सोमबार कीर्तिपुरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बौल्दै अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गणतन्त्र उल्ट्याउन लागि परेको आरोप लगाएका हुन्। उनले माओवादी शिथिल हुँदा, कार्यव्यस्ततामा हुँदा प्रतिगमनकारी शक्तिले गणतन्त्र नै सक्न लागि परेको आरोप लगाए। उनले पार्टी अब नयाँ संकल्पसहित फेरि अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका केही मानिससँग भेटेर आफूलाई पहिल्यैदेखि गणतन्त्र मन नपरेको र मौका मिले उल्ट्याइदिने बताएको आरोप लगाए। ‘अलिकति हामी शिथिल हुँदा, माओवादी विभाजित हुँदा र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु अलिकति व्यक्तिगत काम...
Oct312021 by N20No Comments
काठमाडौँ । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै उनले स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । उनले उक्त दस्तावेज छलफल तथा बहसका लागि पार्टीमा प्रस्तुत गरेका हुन् । दस्तावेजका अन्य खण्ड तथा उपखण्डहरूमा संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत, संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक, नेपालका प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी, किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ ?, कहाँबाट आयो धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा ?, हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राष्ट्रवादबीचको अन्तर, गणतन्त्रमाथिको खतरा, महिला, मधेशी, जनजाती लगायत अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतहरूको हकहितको स...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवारको आम्दानी के हो ? समाजसेवा र परिवारको खर्च कसरी धानेका छन् ?
काठमाडौं । नेपालका शाहवंशीय अन्तिम राजा हुन्, ज्ञानेन्द्र शाह । २००७ र २०५८ सालमा दुईपटक राजाको श्रीपेच लगाएका ज्ञानेन्द्र उनकै शासन कालमा मुलुकबाट राजसंस्था अन्त्य भयो । २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन सपरिवार दिल्ली जाँदा उनी मामाघरमा छुटेका थिए । त्यसपछि उनलाई तत्कालीन राणा शासकले राजा घोषणा गर्दै श्रीपेच लगाइदिएका थिए । राजा, राणा र दलहरुबीचको सहमतिअनुसार प्रजातन्त्र घोषणा गरिएयो । यसपछि २०५८ साल जेठ १९ गते भएको राजदरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो । र उनले करिब ५ वर्ष शासन गरेसँगै मुलुकबाटै राजसंस्था अन्त्य भयो । ज्ञानेन्द्र शाहवंशका अन्तिम राजा बने । पूर्वराजाको हैसियतमा रहेको ११ वर्ष भइसक्यो । तर, उनको रवाफ भने राजाकै जस्तै छ । उनको परिवारिक सदस्यको पनि खर्च असामान्य छ । ज्ञानेन्द्रका छोरा ...
चैत ५ गते वडा र पालिकाको चुनाव !
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन ५ चैत २०७८ भित्र गरिसक्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आयोग पदाधिकारीहरुले राष्ट्रियसभा सदस्यका साथै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको छ । बालुवाटारमा भएको भेटमा आयोग पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन चैत ५ भित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (गाउँ र नगरसभा) को कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो । यस्तै ऐनमा दफा ५५ मा पहिलो पटक निर्वाचन भएको हकमा...